Fifidianana ben’ny tanana :: Olom-baovao vonona hanarina an’Iarivo i Naina Andriantsitohaina • AoRaha
« Tonga izao ny fotoana hanarenana an’Antananarivo ». Io fehezan-teny fohy io no nanehoan’Andriantsitohaina Naina, kandidà natolotry ny Vondrona politika miara-dia amin’i Andry Rajoelina (Ird), ny fahavononany hiatrika ny fifidianana ben’ny tanàna eto Antananarivo renivohitra. Nohamafisin’ity kandidà ity fa sempotra tanteraka Antananarivo renivohitra.
“Tofoka noho ny fitadiavana tombontsoa manokana vokatry ny kajikajy politika ny mponina eto an-drenivohitra”, hoy izy, ka antony izay nahatapa-kevitra azy hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanavotana an’Iarivo.
“Vonona aho androany ho Ben’ny tanànan’Antananarivo. Malahelo isika mahita ny zava-misy eto an-drenivohitra. Mila olom-baovao manam-pahendrena, Raiamandreny sahy sy vonona hanarina ny tanàna isika. Mahatsapa fa manana adidy amin’izany ny tenako amin’ny maha zanak’Antananarivo ahy”, hoy izy tetsy amin’ny Pk00, Antanimena, nanoloana an’ireo mpikatroka politika eo anivon’ny Ird sy ireo solontenan’ny vondrona mpandraharaha maro sy olobe eto an-drenivohitra.
Vinam-pampandrosoana maro mifototra amin’ny fanomezana endrika vaovao ho an’ny tanànan’Antananarivo sahady no nampahafantarin’ny kandidà Andriantsitohaina Naina, tetsy Antanimena. Nataony ho laharam-pahamehana, ohatra, ny momba ny fiahiana ny fandriampahalemana, ny fanorenana tsena manara-penitra, ny fananganana tobim-pahasalamana vaovao, ny fanorenana fotodrafitrasa maoderina… Noporofoiny fa olom-baovao sady tanora vonona ny lehilahy fa tsy mitsapatsapa na atosiky ny fitiavan-tena politika
Tsy noadinoiny ihany koa anefa ny fiahiana an’ireo mponina sahirana eto an-drenivohitra sy ny momba ny fako ary ny famongorana ny kolikoly. “Hisy ny fanorenana fotodrafitrasa ho azy ireo. Mahamenatra ny miaina ao anatin’ny loto. Ampy izay ny gaboraraka sy ny kolikoly. Ny mpivarotra dia afaka hiasa malalaka hampiroborobo ny toekarena manaraka ny fepetra”, hoy hatrany ny kandidà Andriantsitohaina Naina.
Tsy naka lavitra fa nisafidy ireo olona akaiky azy ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry. Nanomboka tamin’ny fampielezan-kevitra no efa teo anilan’ny Filoha hatrany Andriantsitohaina Naina. Rehefa lany ho Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry dia izy no nosafidiany hitana ny toeran’ny minisitry ny Raharaham-bahiny mialoha izao firotsahany ho kandidà amin’ny fifidianana ben’ny tanàna izao.
Mpandraharaha amina sehatra ara-barotra maro ny kandidà Andriatsitohaina Naina talohan’ny nidirany an-tsehatra amin’ny fanomezan-tanana ho fampandrosoana ny firenena, ary izao fanarenana ny renivohitra izao.
Fanatanjahantena sy fampandrosoana :: Nankasitrahan’i Afrika Rajoelina Andry